Sucuudiga oo difaacay go'aan uu soo saaray oo ku aadan mugga sameecadaha masaajidda - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Sucuudiga oo difaacay go’aan uu soo saaray oo ku aadan mugga sameecadaha masaajidda
On Jun 1, 2021 215
Addis Ababa,June 01, 2021 (Ginbot 25,2013 T.I (FBC/SOMALI)-Wasiirka Arrimaha Diinta ee Sacuudi Carabiya ayaa Isniintii difaacay amar muran dhaliyey oo lagu xaddiday mugga dhawaqa sameecadaha Masaajidada, isaga oo sheegay inuu ka dhashay cabasho ka timid shacabka.
Wasaaradad Arrimaha Diinta ayaa siyaasad culus oo ay qaadatay toddobaadkii tegay waxay ku amartay in sameecadaha aan laga dheereyn karin saddex meelood meel ka mid ah muggooda ama 33%.
Amarka oo sidoo kale isticmaalka sameecadaha ku xaddiday kaliya aadaanka, kana reebay khudbadaha iyo wacdiga kale, ayaa horseeday in si weyn looga falceliyo baraha bulshada.
Wasiirka Arrimaha Diinta Abdullatif al-Sheikh ayaa sheegay in amarkan uu jawaab u ahaa cabasho ka timid muwaadiniinta qaar oo aheyd in maqalka dheer uu carqalad ku yahay caruurta iyo dadka da’da ah.
“Kuwa doonaya inay tukadaan uma baahna inay sugaan….aadaanka Imaamka,” ayuu al-Sheikh ku yidhi muuqaal uu baahiyey taleefishinka dowladda.“Waa inay Masjidka sii joogaan kahor,” ayuu ku daray.
Sidoo kale dhowr taleefishin ayaa baahiya aadaanka iyo qur’aanka, ayuu sheegay al-Sheikh, isaga oo soo jeediyey in sameecadaha ay leeyihiin ujeedooyin kooban oo kaliya.
Sacuudiga oo ah dal ay ku yaallaan kumanaan Masjid, ayaa dad badan waxay soo dhoweeyeen tallaabada ay dowladda ku yareysay dhererka sameecadaha, hase yeeshee sidoo kale dad badan ayaa aad ugu dhaliilay baraha bulshada.
Sheikh ayaa sheegay in camaabreynta siyaasaddan ay faafinayaan “cadowga boqortooyada” kuwaas “oo doonaya inay kiciyaan ra’yiga dadweynaha.
Milatariga Mali oo xabsiga dhigay Madaxweynihii iyo Ra’iisal Wasaarihii…